» Deg Deg: Ciidamada Kenya oo goordhow Islii ku qarxiyay waxyaabaha qarxa Boga Hore SOOMAALIYA
Deg Deg: Ciidamada Kenya oo goordhow Islii ku qarxiyay waxyaabaha qarxa
December 13, 2012 - Written by maamule - Edited bymaamule ShareWar hada si deg deg ah inooga soo gaaraya xaafada Islii ee magaalada Nairobi ayaa sheegaya in ciidamada amaanka Kenya ay qarxiyeen waxyaabaha qarxa oo dhulka ku aasanaa.
Haweenay kamid ah dadka deegaanka xaafada Islii ayaa ciidamada kusoo wargelisay in waxyaabaha qarxa lagu aasay meel aan ka dheereyn gurigeeda.
Ciidamada ayaa gaaray goobta ay walxahaas qarxa ku jireen kadibna ay qarxiyeen ,mana jiran wax dhibaato ah oo qaraxaas ka dhashay.
Howlgallo balaaran ayay ciidamada ka wadaan halka waxyaabahaas qarxa laga helay ee xaafada Islii dhanka Juja Road, iyadoo la arkayo ciidamo badan oo guryaha galaya.
Xaafada Islii ayaa waxaa wali ka soconaya howlgallo balaaran oo ay ciidamada ku bartilmaameedsanayaan dadka sida sharci darada ah Kenya ku jooga.
3 Responses to Deg Deg: Ciidamada Kenya oo goordhow Islii ku qarxiyay waxyaabaha qarxa
Khalid says:	December 13, 2012 at 14:33	Nagta shegtey hadi ey argeysey in dhulka wax la galinayey maxey policeka u so wargalin weysey aniga shekadan ma fahmin wa mid lagu banesanayo dadka muslimta ah iyo xolahoda kirismiska wixi lagu adi laha iyo sanadka cusub ya laga diyarinaya shacabka musliminta ah
Reply	Habasweyne secondary boys says:	December 13, 2012 at 15:29	Naagta wayba shegtee sheegitan malaba war wuxu war xuma
Reply	Akra says:	December 14, 2012 at 09:56	Am very sorry in laqarxiyo an raway naagtas xaa kaquseyo eyada kenyatiga